भवनसंहिताको पालना गरौं | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / भवनसंहिताको पालना गरौं
भवनसंहिताको पालना गरौं
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता January 17, 2018	0 193 Views
२० औ ं भूकम्पीय सुरक्षा दिवस मंगलबार बिभिन्न चे तनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । ‘सबल समुदाय र स् थानीय सरकारः भूकम्पीय सुरक्षाको बलियो आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाइएको यो दिवसको सन्दर्भ र भूकम्पीय जो खिम न्यूनीकरणका विषयमा शहरी डिभिजन तथा भवन निर्माण कार्यालय दाङका प्रमुख राजे न्द्रप्रसाद पाण्डेसग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा“ प्रस् तुत गरिएको छ । –सम्पादक
राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस किन ?
विस १९९० माघ २ गते गएको महाविनाशकारी भूकम्पको स् मरण गदैर् २०५५ सालदे खि ने पाल सरकारले राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको रुपमा मनाउन शुरु गरे को हो  । विगतमा भूकम्पका कारण भएको धनजनको क्षतिको स् मरण गदैर् र अब आउने भूकम्पहरुबाट कसरी मानवीय तथा भौ तिक क्षतिको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्यो कुरालाई जनस् तरसम्म लगे र सचे तना फै लाउने उद्दे श्यले यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।
सचे तना कहा–कहा र कसरी भइरहे का छन् ?
सरकारले विभिन्न स् थानीय तह विशे षगरी नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरुमा प्राविधिकहरुले ती क्षे त्रहरुमा बन्ने घरहरुलाई भूकम्प प्रतिरो धी बनाउन डिजाइन, स् िटमे ट र स् वीकृति गराउने तथा भूकम्प प्रतिरो धी घर बने का छन् छै नन् भन्ने कुराको निरीक्षण पनि गनेर् काम स् थानीय तहबाटै भइरहे को र सरकार भवन निर्माणका लागि शहरी डिभिजन तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतका डिभिजन कार्यालयहरुले आफ्ना कार्यक्षे त्रभित्रका सरकारी भवनहरु भूकम्प प्रतिरो धी बनाउन डिजाइन, स् िटमे ट गराउने काम भइरहे को छ । त्यस् तै सरकारले सञ्चालन गरे को जनता आवास कार्यक्रमका इकाईहरुबाट पनि यसको कार्यान्वयन गराइरहे को अवस् था छ ।
आम नागरिकहरु कसरी सचे त हुन्छन् त ?
स् थानीय तहभित्र बन्ने भौ तिक संरचनाहरुका लागि नगरपालिकाका प्राविधिकहरुले सचे त गराउनुहुन्छ । जसअन्तर्गत नगरपालिकाहरुले त्यसक्षे त्रमा काम गनेर् कालीगढहरुलाई भूकम्प प्रतिरो धी भवन निर्माण गनेर् तालिम दिएको छ भने भवन डिभिजन कार्यालयले पनि त्यसमा सहयो ग गरे को छ ।
ग्रामीण क्षे त्रमा पनि भवन डिभिजनले खासगरी जनता आवास कार्यक्रम लागु भएका क्षे त्रहरुमा कालीगढहरुलाई तालिम दिने काम गरे को छ । त्यस् तै बाढी प्रभावित क्षे त्रहरुमा पनि त्यो काम हामीले गरिरहे का छांै  ।
जो खिमका हिसाबले दाङ कस् तो अवस् थामा छ ?
जनघनत्वको हिसाबले हे र्दा दाङ अरु क्षे त्र भन्दा प्रशस् त खुला क्षे त्र भएको अवस् था छ । बस् ती साह्रै बाक्लो छै न । तर नदी किनारका तटीय क्षे त्रहरुमा वस् ती व्यवस् थापन गर्नुपनेर् दे खिन्छ । भूकम्पीय हिसाबले वा अन्य प्राकृतिक प्रको पको हिसाबले संवे दनशील ठाउ“हरु पनि छन् । ती ठाउ“हरुबाट वस् ती व्यवस् थापन गर्नुपनेर् दे खिन्छ । यहा“ प्रशस् त खुला क्षे त्र भएकाले अन्य ठाउ“को तुलनामा दाङमा भूकम्पीय जो खिम कम दे खिन्छ र पनि हाम्रा शहरी क्षे त्रहरु अस् तव्यस् त तरीकाले बृद्धि भइरहे का छन् । व्यवस् िथत प्लानिङबिनै भौ तिक संरचनाहरु निर्माण भइरहे का छन् । यसलाई रो क्नु ठूलो चुनौ ती पनि छ । किनभने व्यक्तिगतरुपमा प्लटिङ भइरहे को छ । खुला क्षे त्रहरु छै नन् । मापदण्ड विपरीतका यस् ता कार्यले भविष्यमा समस् या ल्याउने दे खिन्छ ।
भूकम्पीय जो खिम न्यूनीकरण गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ ?
पहिलो कुरा भूकम्प प्रतिरो धी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने जो खिमलाई धे रै हिसाबले न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । अकोर् कुरा स् थानीयस् तरमा हामीले भूकम्पले क्षति गदैर् न । हामीले बनाएका कमजो र संरचनाका कारण हामी भूकम्पबाट पीडित हुनुपरे को हो भन्ने कुरालाई जनमानसमा पु¥याउनुपर्छ । त्यस् तै हाम्रा वस् तीहरुमा प्रशस् त खुला क्षे त्र राख्नुपर्छ । खुला क्षे त्र रहने गरी प्लानिङ गरियो भने के ही हदसम्म हामी भूकम्पीय जो खिमका हिसाबले सुरक्षित हुन्छौ ं ।
भूकम्प प्रतिरो धी संरचना कति छन् ?
घो राही उपमहानगरपालिकाले नक्सा पास गनेर् बे लामा भवनसंहिता अनुसार काम गरे को दे खिन्छ । यसले धे रै सुधार भएको छ । लमहीमा समस् या छ । त्यहा“ भवनसंहिताको पालना गरिएको छै न । त्यसले समस् या ल्याउ“छ । रह्यो ग्रामीणस् तरको कुरा, त्यहा“ त झन हुन सके कै छै न । त्यसका लागि हामीले तालिम दिएका कालीगढहरुमाथि नै भरपनेर् अवस् था छ । घर बनाउने हरुलाई कालीगढहरु आफै ले सम्झाएर काम भएको छ, तर त्यो त्यति प्रभावकारी हुन सके को छै न । यसले गर्दा भवन डिभिजनले बनाएका संरचनाबाहे क अरु सबै भूकम्प प्रतिरो धी हुन सके का छै नन् । यसलाई जनचे तनाको अभिबृद्धि गर्नुपनेर् र कालीगढहरुलाई थप तालिमको व्यवस् था गर्नुपनेर् हुन्छ र अहिले त जननिर्वाचित प्रतिनिधिसहितको प्रतिनिधि भएको हिसाबले स् थानीय तह मार्फत नै गएर प्राविधिक रुपमा भवन डिभिजनले सहयो ग गनेर् र उहा“हरुस“ग समन्वय गरे र काम गर्न सकियो भने भो लिका दिनमा भूकम्प प्रतिरो धी संरचनाहरु निर्माण गर्न सकिन्छ, तर अहिले को अवस् थामा भइरहे को अवस् था छै न ।
भवनसंहिता भएर मात्रै हु“दो रै नछ, कार्यान्वयन गनेर् चाहि“ कसले हो त ?
अब त जनप्रतिनिधिसहितको स् थानीय तह आइसके को अवस् था छ । भूकम्प प्रतिरो धी संरचना निर्माणका लागि जनप्रतिनिधिहरुमार्फत कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ ।
भूकम्प प्रतिरो धी संरचना निर्माणको विधि के हो ?
सामान्यतयाः हामीले २० औ ं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसर पारे र भवन डिभिजन कार्यालय दाङले हाम्रा १० वटा स् थानीय तहहरुमा भवन विभागबाट तयार गरिएका विभिन्न १७ मो डलका भूकम्प प्रतिरो धी घरहरु थिए । ती घरका नक्साहरुलाई हामीले एक एक से ट दिने भने र फ्ले क्स प्रिन्ट तयार गरे का छौ ं । एक दुईदिनमै अब ती नक्साहरु स् थानीय तहहरुलाई बुझाउने कार्यक्रम पनि छ । ती सबै तहमा निर्माणसम्बन्धी काम गनेर् प्राविधिकहरुले कार्यान्वयन गनेर् गराउने विषयमा गम्भीर भएर लाग्नुप¥यो  ।
के भयो भने भूकम्प प्रतिरो धी हुन्छ ?
सामान्य कुरा छ । पिलरवाला घर र पिलर नराखे का घर हुन्छन् । पिलर नराखे का घरहरु बनाउ“दा जगको चौ डाइ र गहिराइको कुरा हुन्छ । को ठाका साइजहरु, झ्याल, ढो काका साइजहरु, गारो का दुरी, ढो कादे खि तलका डिपीसी, झ्यालदे खि तलका सिल ले वल, लिन्टल ले वलहरु त्यस् तै कर्नर बार, स् टीचलगायतका प्राविधिक कुराहरुमा ध्यान दिइयो भने न्यूनतमरुपमा हाम्रा संरचनाहरु भूकम्प प्रतिरो धी हुन्छन् ।
अहिले बने का संरचना भूकम्प प्रतिरो धी छै नन् उसो भए ?
दे खिएको छै न । दाङमा खासगरी ग्रामीण क्षे त्रहरुमा बने को संरचनाहरु भूकम्प प्रतिरो धी छै नन् र शहरमा पनि त्यो समस् या छ ।
भूकम्प प्रतिरो धी बनाउन महंगो हो ला ?
खासै छै न । जति भौ तिक संरचना बनाउने लागत हुन्छ त्यसमा पाचदेखि दश प्रतिशत मात्रै लागत बढायो भने भूकम्प प्रतिरो धी संरचना बन्छ ।
के ग¥यो भने भूकम्पबाट मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ?
भूकम्प प्रतिरो धी संरचना बनाउनु प¥यो पहिलो कुरा । भूकम्प आउ“दा बस् नसक्ने खुला क्षे त्रहरु राख्ने , वस् ती विकास गर्दा फराकिलो सडकको व्यवस् था गर्न सकियो भने भूकम्प आउ“दा भौ तिक संरचना भत्किदा पनि मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
Previous: दूधरासमा आइएमइको सेवा शुरु
Next: दाङमा राप्ती क्षेत्रकै सुविधासम्पन्न होटल सञ्चालनमा